सिसिएमसीले भद्रगोल बनाएको अक्सिजन वितरण प्रणाली स्वास्थ्य मन्त्रालयले सुधार्दै :: Setopati
सिसिएमसीले भद्रगोल बनाएको अक्सिजन वितरण प्रणाली स्वास्थ्य मन्त्रालयले सुधार्दै अस्पताल भन्छन् - अहिले धेरै सहज छ
विवेक राई काठमाडौं, जेठ १२
अघिल्लो सातासम्म उपत्यकाका सबैजसो अस्पतालहरूमा अक्सिजनको हाहाकार थियो। जसले गर्दा अस्पतालहरूलाई नयाँ बिरामी भर्ना गर्ने त के कुरा भएका बिरामीहरूलाई समेत अक्सिजन पुर्‍याउन हम्मे पर्‍यो।
अक्सिजन अभावको समस्या वैशाख सुरूदेखि नै बढ्दै गएपछि अक्सिजन वितरणलाई सहज बनाउने भन्दै त्यसको जिम्मा कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी)ले लियो।
आफूभन्दा शक्तिशाली संयन्त्रले जिम्मा लिने भनेपछि त्यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि हस्तक्षेप गरेन।
अक्सिजन वितरणको जिम्मा लिएपछि सिसिएमसीले कोटा प्रणाली तोक्दै अस्पतालहरूलाई कति वटा अक्सिजन सिलिण्डर दिने भनेर तोक्यो। तर, अक्सिजन वितरणको समस्या सुल्झिएन। उल्टो भद्रगोल भयो।
अस्पतालहरूले कोटा अनुसार अक्सिजन नपाइएको भन्दै संक्रमितको उपचार गर्न गाह्रो भएको निरन्तर गुनासो गर्न थाले। उपत्यकाकै ११ वटा भन्दा बढी अस्पतालले अक्सिजन नभएको भन्दै नयाँ बिरामी भर्ना गर्न नसक्ने भन्दै हात नै उठाए। त्यसपछि भने मन्त्रालयले अक्सिजन वितरणको जिम्मा सिसिएमसीबाट आफ्नो हातमा लिने निर्णय गर्‍यो।
मन्त्रालयले सुरूमै कोटा प्रणालीलाई खारेज गरी अस्पताललाई बिरामीको संख्याको आधारमा अक्सिजन वितरण गर्ने भनेर नयाँ नियम लगायो। त्यसलाई समन्वय गर्नका लागि मन्त्रालयले टिम (क) र टिम (ख) भनेर दुईटा टिम गठन गर्‍यो। त्यही टिमले अस्पतालहरूसँग समन्वय गरेर अक्सिजन वितरण गर्ने भनियो। नभन्दै अक्सिजन वितरणको जिम्मा मन्त्रालयले लिएपछि धेरै सहज भएको अस्पतालहरूले जनाएका छन्।
नेपाल प्रहरी अस्पतालकी निर्देशक डा. आशा सिंह भन्छिन्, ‘पहिलेभन्दा धेरै सहज भएको छ। उहाँहरूले राम्रो समन्वय गरिदिनुभएको छ। पहिलेजस्तो आधा घण्टामा सकियो भने के गर्ने भन्ने चिन्ता हुँदैन।’
उनले अहिले मागभन्दा केही कम अक्सिजन पाए पनि समयमै र व्यवस्थित तरिकाले आइरहेको बताइन्। अहिले दैनिक दुई सय ५० अक्सिजन सिलिण्डर आवश्यक परेकोमा करिब डेढ सय आउने गरेको र बाँकी अस्पतालकै अक्सिजन प्लान्टबाट उत्पादित अक्सिजनबाट व्यवस्थापन गरिएको डा. सिंहले जनाइन्।
अहिले अस्पतालले अक्सिजन व्यवस्थापन गर्ने कुरामा केही सुधार गरेको भन्दै उनले भनिन्, ‘हामीले पनि प्रणालीमा केही सुधारेका छौं। पहिले अक्सिजन सकिएपछि मात्र लिन पठाउने गरिन्थ्यो भने अहिले ३० देखि ४० वटा सिलिण्डर खाली हुनेवित्तिकै लगेर लाइनमा राखिदिन्छौं। त्यसले गर्दा सहज भएको छ।’
महाराजगञ्जस्थित टिचिङ अस्पतालले पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले अक्सिजन वितरणमा समन्वय गर्न थालेपछि धेरै सहज भएको जनाएको छ। अस्पतालका निर्देशक डा. दिनेश काफ्लेका अनुसार पहिले कोटा प्रणाली लागू हुँदा अफ्ठ्यारो थियो, अहिले सहज छ।
‘कोटा प्रणाली सुरू गरेपछि अलिकति अफ्ठ्यारो भयो। दिनमा एक सयदेखि डेढ सय सिलिण्डर मात्र आउँथ्यो। बाहिर मानिसहरू पनि आत्तिएर अब अक्सिजन पाइँदैन कि भनेर किनेर घरघरमा राख्न थाल्नुभयो। तर, दुई चार दिनयता बने सहज भएको छ,’ निर्देशक काफ्लेले भने।
उनले अहिले दैनिक दुई सय सिलिण्डर पाइरहेको भन्दै अहिले अस्पतालमा अक्सिजन चाहिने बिरामीहरूको लागि बेड खाली रहेको जनाए। यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले राम्रो समन्वय गरेको भन्दै उनले भने, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले राम्रो काम के गरेको छ भने उहाँहरू अस्पतालमै आएर बिरामीको संख्या हेरेर त्यही अनुसार उद्योगहरूलाई अक्सिजन दिन सिफारिस गर्नुभएको छ।’
पाटन अस्पतालले पनि पहिले भन्दा पछिल्लो केही दिनयता अक्सिजन व्यवस्थापन केही सहज भएको जनाएको छ। अस्पतालका निर्देशक डा. रवि शाक्यले अझै पनि माग अनुसार अक्सिजन नआए पनि पहिलेभन्दा केही सहज भने भएको बताए।
पहिले सिसिएमसीले वितरण गर्दा समस्या रहेको भन्दै निर्देशक काफ्लेले भने, ‘सिसिएमसीले गर्न खोज्दा त भद्रगोल नै भएको थियो। अस्पतालहरू यसलाई यति उसलाई यति देऊ भनेर प्लान्टहरूलाई भन्न थाल्यो। त्यसले प्लान्टहरूलाई कसको कुरा सुन्ने, कसको नसुन्ने भनेर झन् अलमल भयो।’
उनले अहिले भने दैनिक दुई सयदेखि दुई सय ५० अक्सिजन सिलिण्डर आइरहेको जनाए। अस्पतालको दैनिक आवश्यकता तीन सय ५० अक्सिजन सिलिण्डर रहेको भन्दै बाँकी भने अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरबाट व्यवस्थापन गरिँदै आएको निर्देशक शाक्य बताउँछन्।
‘अझै पनि मागअनुसार अक्सिजन आइरहेको छैन। अहिले कम अक्सिजन चाहिने बिरामीहरूलाई कन्सन्ट्रेटरबाट व्यवस्थापन गरिरहेका छौं,’ उनले भने।
प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ १२, २०७८, १०:३३:००